Fikarohana momba ny firaisana Ny toetran'Andriamanitra, ny fiainan'i Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty Ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Ny toetran'Andriamanitra, ny fiainan'i Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty Ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginie
Na dia ny iraka voalohany an'ny ReincarnationResearch.com aza dia ny fanaparitahana porofo manamarina ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray, misy sokajy tranga iray ao amin'ny tranonkalantsika mitondra ny lohateny hoe "Fampahafantarana ny Reincarnation Cities" izay manasongadina ny asa nataoko tamin'ny mpanelanelana amin'i Kevin Ryerson. Sary eo ankavanana i Kevin. Kevin dia mampita fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re izay tonga nofo farany teto ambonin'ny tany 3000 taona lasa izay.
Niara-niasa tamin'i Kevin sy Ahtun Re aho isam-bolana hatramin'ny 2001. Ao amin'ny fanombatombako, Ahtun Re dia toe-tsaina manjavozavo izay misaraka amin'i Kevin Ryerson, satria i Ahtun Re dia manana toetra hafa, fahatsapana vazivazy ary loharanom-pahalalàna momba ny fahalalana. Ny Ahtun Re dia naneho ny fahaizana mametraka ny lalao taloha amin'ny hasarobidiny.
Taorian'ny nahazoako fitokisana sy fahatokiana tao amin'i Ahtun Re, dia nanomboka nanao resaka nifanaovana taminy aho mikasika ny dikan'ny fiainana, izay voarakitra ao amin'ny bokiko Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana. Tao anatin'ireo adihevitra ireo dia nanontany momba an'i Jesoa aho. Voalohany indrindra, nanambara i Ahtun Re fa ny fisian'ny fitsanganan-ko velona an'i Jesoa dia niseho tamin'ny tranga ara-tantara.
Ankoatra izany, nanamafy i Ahtun Re fa nanan-janaka 30 teo ho eo talohan'ny nahatongavan'i Jesoa Kristy tamin'ny nahatongavany ho nofo. Ireo fanavaozana lasa teo dia nofaritana tamin'ny asan'i Edgar Cayce ary izaho dia mampiseho ny fiainan'i Jesosy vitsivitsy Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana. Tao anatin'ny fiainany teo aloha dia nifantoka tamin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fanoloran-tenany i Jesoa.
Ny fomba iray ahafantarana an'i Jesosy dia ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny tamin'ny talenta manokana mba hitambatra amin'Andriamanitra. Ny fanahintsika dia nomena talenta talenta sy fahaizana izay asehontsika mandritra ny androm-piainantsika. Izany no mahatonga ireo mpanakanto hiverina hiverina indray amin'ny maha-mpanakanto, mozika ho mpitendry mozika sy mpitarika politika ho mpanao politika. Tamin'ny alàlan'ny fampodiana ananany dia nanampy an'i Jesosy ho amin'ny toerana ahafahany miara-mipetraka amin'Andriamanitra, ka nanambara fa "izaho sy ny Ray dia iray ihany."
Vao haingana aho no nanontany an'i Ahtun Re momba ny toetran'Andriamanitra. Ahtun Re nilaza tamiko fa misy ny lafiny maha-vehivavy sy lahy an'Andriamanitra. Ny lafiny maha-vehivavy dia mirona amin'ny raharahan'ny olombelona ary amin'ny ohatra ohatra, nilaza i Ahtun Re fa nanampy nanamora ny fitsanganana amin'ny maty io lafiny io. Ny lafiny maha-lahy an'Andriamanitra dia hery ampiasaina izao tontolo izao, ny vahindanitra ary ny fiainantsika.
Ohatra iray hafa amin'ny fomba nidiran'Andriamanitra an-tsehatra ny raharaha iray nataon'i Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny University of Virginia, izay nanoratana ny fitsanganana amin'ny maty na fanarenana zaza maty. Ity tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray an'i Sobha Ram | Jasbir Jat dia mampiseho an-tsehatra fa fiara ny fanahy raha ny marina. Raha te hahalala bebe kokoa dia mankanesa any:
Ny fitsangatsanganana amin'ny vatana vaovao ao amin'ny tranga Sobha Ram | Jasbir Jat